Fiiro gaar ah: Waan ka xumahay in aan kuu sheego in aad ku raacin karto hage hoose si aad hoos macruufka 8 ilaa macruufka 7 mar dambe, sababta oo ah Apple ayaa naafo habka la cadeeyo ee macruufka 7.1.2. Sorry! Haddii aad la casriyeeyay qalab macruufka in macruufka 8, hadda ikhtiyaarka kaliya ee waa in macruufka 8 on qalab aad. Haddii qalabka macruufka weli da'aan, waa in aad dardar macruufka 8 .
Ka dib markii la sii daayo rasmiga ah ee macruufka 8, dadka waxa aan arkay caban badan in macruufka 8 update dhigaysa Artur iPhone : "Markii aan soo wac waxa ay leedahay Artur ah oo ku saabsan 1.5sec in ay tagaan call a"; "Icon wargelinta u muuqataa in ka badan 5 secs u WhatsApp"; "Tan iyo markii aan la casriyeeyay si iOS8, waxaan dareemayaa sida haddii internet-ka ee aan telefoonka hoos Kobocii gabi ahaanba". In kastoo ay jiraan qaar ka mid ah siyaabaha ay u dardar macruufka 8 , dadka qaar ayaa ku adkeeysta in hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7. Hadda waxaad hoos karaa macruufka 8 ilaa macruufka 7, laakiin dhaqso kor. Dhowr maalmood ka dib, Apple marnaba dayn doonaa inaad hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7 mar dambe. Fiiri warbixinta soo socota si ay u bartaan sida loo hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7.
Qaybta 1. 5 sababaha ugu weyn ee ay u hoos si macruufka 7 ka macruufka 8
Qaybta 2. Waxyaabaha sameeyaa si hoos macruufka 8 ilaa macruufka 7
Qaybta 3. Tallaabooyinka hoos macruufka 8 ilaa macruufka 7
Hel Qaybta 4. Data Back to Device ka dib markii hoos u macruufka 8 ilaa macruufka 7
Ayaa sii daayay 5 macruufka 8 beta qoraalkii ka yar tahay imtixaanka. Waa wax iska caadi ah in ay jiraan dhibaatooyin ay Gordhaw Kadhoofaan 8. Marka la barbar dhigo macruufka 7, macruufka 8 ka yar xasiloon oo aan la shaqeeyaa si habsami leh oo ku saabsan qalabka. Hoos waxaa ku qoran sababaha ugu weyn ee loogu talagalay dadka si hoos macruufka 8 ilaa macruufka 7.
macruufka 8 wuu ka rogrogmadaa;
Chine badan oo ka shaqeeya sababtoo ah incompatibility la macruufka 8 tago;
Device, sida iPhone 4s, iPad 2, iPad Cusub, iyo iPod taabto waa laggy ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 8;
macruufka 8-mareenada nolosha batari;
Waxaa jira cayayaanka badan ee macruufka 8;
Ka hor inta hoos macruufka 8 ilaa macruufka 7, waa in aad xog gurmad ka qalab aad haddii khasaare xogta. Asal ahaan, waxaa jira 2 siyaabo fudud in xogta gurmad ka qalabka macruufka: Isticmaal Lugood in xogta gurmad iyo isticmaali iCloud in xogta gurmad.
Muhiim: file ayaa gurmad aad u abuuray sida tallaabooyinka hoose ma loo isticmaali karaa si loo soo celiyo si ay macruufka aad 7 qalab ka dib markii hoos u. Waad og tihiin in aad ayan soo celin kara xogta ka macruufka 8 gurmad ah oo ku saabsan qalab macruufka 7 ah. Sababta ay sameeyaan gurmad waa in hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7 lumin doonaa xogta aad iyo aad isku dayi kartaa habka Qeybta 4 si aad u hesho xogta dib via gurmad iCloud ama Lugood faylka.
1) Isticmaal Lugood in gurmad xogta
Isticmaalka Lugood in gurmad xogta waa quruxsan fudud oo si sahlan.
Connect aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri your computer via cable USB ah> Burcad Lugood> Riix qalab on Lugood> guji "Back Up Hadda '.
2) xogta kaabta in iCloud
Habka ugu fudud ee xogta gurmad ka hor inta aanad hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7 waa loo sameeyo via iCloud. Just u samayn on your iPhone, iPad ama iPod taabto.
Connect qalab la Wi-Fi oo Settings tuubada> iCloud> Kaydinta & kaabta. In bogga cusub, hoos u dhaqaaq ka jaftaa ikhtiyaarka "Back Up Hadda '.
Tallaabada 1. Download firmware saxda ah (file IPSW) ee macruufka 7 Sidaad u macruufka model qalab si aad u computer. Hadda, aad hoos karaa macruufka 8 ilaa macruufka 7 version la soo dhaafay, macruufka 7.1.2. Waxa aad qaadan doonta dhawr daqiiqo dhammayn nidaamka download. Just samir.
Tallaabada 2. Download iyo rakibi Lugood dambeeyay (version 11.3.1 hadda) on your computer. Haddii aad ku rakiban Lugood hore on your computer, riix 'Hubi Updates' (on Mac waa in Lugood menu ku qoofalan ah, on Windows PC, waa in menu Gacansiinta).
Tallaabada 3. Lugood Launch iyo xiriiriyaan iPhone, iPad ama iPod xiriiri your computer via cable USB ah. Qalab aad ka muuqan doontaa Lugood. Haddii qalab aad ayaan ka soo muuqan Lugood, waxaa la bilaabi. Riix qalab aad iyo dedeg yahay tab Kooban.
dhankiisa midigta, hoos u hay muftaaxa Shift (key Xulashada on Mac) iyo guji 'Update'. Daaqadda pop-up ka, hel oo dooro file .ipsw aad soo bixi si aad u computer in tallaabada 1. Click 'Update' mar kale si loo xaqiijiyo tallaabada. Ka dib markaas Lugood xaqiijin doonaa update la Apple oo bilaabaya geedi socodka hoos ku. Marka geedi socodka hoos la dhammeeyo, waxaad ka arki kartaa doorasho cusub Mudanayaasha muuqataa on Lugood.
Ka dib hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7, aad arki doonaa xog ku saabsan qalab aad lumo. Si aad u hesho qaar ka mid ah macluumaadka lumay dib, sida farriimaha qoraalka ah, xiriirada, sawiro, wac taariikhda, qoraalo, iwm, weeyna u maleeyeen in aad isticmaasho Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) lagu soo saaro xogta ka Lugood ama iCloud gurmad aad file ' shan ka dhigay in Part 2 . Waa kuwan talaabooyin fudud aad u hesho gurmad xogta iyada oo Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Hel xogta ka Lugood gurmad file dib
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo guji ikhtiyaarka 'ka soo kabsado Lugood gurmad file' dusheeda.
Step2. Dooro Lugood gurmad file aad abuuray Part 2 sida ay taariikhda la abuuray iyo download it.
Tallaabada 3. Riix "Start Scan 'Macdan xogta laga gurmad Lugood faylka. Ka dibna waxaad ka eegi kartaa nooca xogta si ku eegaan dhammaan xogta way ka hoosaysaa. Ka dib markaas, waa in aad xulan xogta doonayay oo guji 'Ladnaansho'. Hadda qoraal fariimaha, xiriirada iyo qoraallada la soo kaban karto, si aad iPhone si toos ah. Sida xogta kale, ku odhan, sawiro ama videos, waxaad soo awgeed waa inaad computer.
Hel xogta ka iCloud gurmad file dib
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo guji ikhtiyaarka 'ka soo kabsado iCloud gurmad file' dusheeda.
Step2. In uu furmo suuqa cusub, saxiixo in la ID iCloud aad. Ha welwelin ku saabsan ammaanka ID iCloud aad. Barnaamijkan marnaba ururiya mid ka mid ah macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Tallaabada 3. Marka dhan iCloud files gurmad waxaa lagu soo bandhigaa uu furmo suuqa, ee ka dooro mid dhawaan aad taageeray inaad kala soo baxdo. Ka dib markii riixaya badhanka Download ee, ee-up pop, doortaan nooca (yada) xogta aad u baahan tahay iyo sii dajinta. Waxaa kuu baajinaysaa waqti by doorashada nooca file inaad kala soo baxdo ah.
Tallaabada 4. Marka download la dhammeeyo, guji "Scan 'Macdan xogta laga gurmad iCloud faylka. Ka dibna waxaad riixi kartaa nooca faylka si ku eegaan dhammaan xogta way ka hoosaysaa. Dooro xogta aad u baahan tahay oo guji 'Ladnaansho'. Dhammaan xogta la soo kabsaday kartaa si aad u computer. Farriimaha qoraalka, xiriirada iyo qoraallada la badbaadiyey kartaa qalab macruufka ah si toos ah.
5 Talo inaad ogaatid oo ku saabsan arrimo 8 Hagaaji
15 Waa in-leeyihiin Apps ka dib Hagaaji macruufka
1 Click si ay u gudbiyaan iPhone si iPhone 6
> Resource > macruufka > Tallaabooyinka hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7